Ahitan-javatra mihitsy ny milina mpivarotra ao Japan—pizza sy tampontsatroka indray no malaza tamin’ity indray mitoraka ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2018 8:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, 繁體中文, Aymara, Français, македонски, polski, বাংলা, Ελληνικά, English
Milina mpivarotra any amin'ny distrikam-pialam-boly ao Honmachi, Tsuruga, Japan. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Efa nalaza tamin'ny fivarotana ireo zavatra mahavariana hatry ny ela ny milina japoney mpivarotra — tahaka ny voninkazo, elo, ary eny fa hatramin'ny kravato aza. Saingy na dia efa misy milina mpivarotra iray isaky ny olona 23 sy vola maty mihoatra ny 60 miliara dolara isa-taona aza, dia mbola misy ihany ny talanjona any amin'izay mitranga eny amin'ny fivoahana ny seranana.
Milaza ny tantaran'ireo milina mpivarotra sakafo tokanamantany miisa telo, hita amin'ny tanàna telo samy hafa, izay nahasarika ny Twitter ny mpisera senegirl ao amin'ny tranonkala fanangonam-botoaty Naver Matome.
Sambany eto Japan? Toa tahaka izay… milina mpivarotra pizza vao mafana! (ha ha) miloka aho fa misy lehilahy razokiny ao anatiny mikarakara ilay pizza.
Ao an-tanànan'i Hiroshima, be resaka ny mponina tamin'ny fahitana ny milina iray mpivarotra pizza miorina eo akaikin'ny toeram-pihaonana [ara-pihariana] TSUTAYA, ao anatin'ny rojom-pirenena fivarotana boky ao Japan. Manolotra karazana pizza roa ilay milina mpivarotra: margherita (basil, fromazy mozzarella, ary saosy voatabia) amin'ny vidiny tokony ho US$10 sy ny frômazy-efatra amin'ny vidiny US$13 ary telo minitra monja ny fotoana ahandroana azy. Manantena ny orinasa niavian'ny TSUTAYA, izay nametraka ity milina mpivarotra ity, fa hametraka milina tahaka izao any amin'ireo fivarotam-boky manerana an'i Japan.
Mandritra izany fotoana izany, gaga am-pifaliana ny olona amin'ny fahitana izany milina mpikapoka [mpanamboatra] pizza.
Ny voalohany amin'ny karazany eto Japan! Milina mpivarotra pizza vita. (^^)
Eto akaikin'ny asako ka nihevitra aho fa ho eto ary hanandrana. Ito izy ito miaraka amin'ny Lemonsco-ko. Tsy nanam-potoana hakàna azy aho, fa amin'ny manaraka aho ho eo! (*'▽'*)
Mandritra izany fotoana izany, any Inashiki, tanàna iray miorina ao amin'ny prefektioran'i Ibaraki tokony ho ora iray avy ao avaratra atsinanan'i Tokyo raha amin'ny fiaran-dalamby, trano fisakafoanana iray no hita ho manana milina mpivarotra efa niasa hatramin'ny taompolo 1960 mbola miasa sy mandeha tsara.
Manaraka ny arabe fandehanana malaky ao amin'ny fijanonan'ny fiara iny misy milina mpivarotra efa tranainy, mampanenmbona ahafahanao mividy sakafo amin'ny boaty. Amin'ny vidiny 300 yen (3 dolara amerikana) ianao afa-mividy sakafo vita amin'ny boaty malefaka nataon'ny fivarotana eo akaiky eo.
Afa-mividy vary sy hena anaty boaty miaraka amin'ny bagety fihinanana ny mpandeha amin'ny vidiny 300 yen. Misy karazany telo azo isafidianana: akoho voaendy, kotoletan-kisoa, ary hena voaendy, ary ity farany ity no tena isafidianan'ny olona.
Ilay milina mivarotra hena nendasina nivoaka tao amin'ny fahitalavitra.
Farany, any amin'ny tanàna miafin'i Kagoshima, any atsimo andrefan'ny nosy Kyushu, no mitoetra ny milina mpivarotra tampontratroka iray. Hita ao amin'ny distrikam-pivarotan'i Kagoshima ao Tenmonkan izany, takona akaikin'ny fiatoan'ny bus ary lazaina ho sarotra hita.
Misy ireo tsara vintana ka mahita milina mpivarotra tsy fahita mahazavatra izay voakarakara amin'ny tampontsatroka matsiro amin'ny vidiny 200 yen (tokony ho 2 dolara amerikana).
Vatosoa miafin'i Kagoshima: milina mpivarotra tampontsatroka!
Manolotra karazana hanitra amin'ny tampontratroka ity karazana milina mpivarotra ity, tafiditra amin'izany ny roatran-tsôkôlà mivaingana, karamelina, roatra frezy mivaingana, ary frômazy. Atolotra ao anaty tavoahangy ny tampontratroka, izay angatahana amin'ny mpanjifa averina rehefa mahalany ry zareo.
Amin'ity milina lasa iray amin'izay tiana indrindra amin'ny karazany ity, manontany tena ny mpisera sasany raha manana iray tahaka izany azy manokana ny tanàna hafa:
“Ao Kagoshima ity milina mpivarotra tampontsatroka ity, fa manana iray ve ny hafa ao amin'ny prefektioran-dry zareo?”
“Tsia, tsy manana izahay. Manam-bintana tokoa ianareo…”